खुमलटार दोस्रो स्थानमा : RajdhaniDaily.com
Homeखेलखुमलटार दोस्रो स्थानमा
खुमलटार दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । खुमलटार युथ क्लब शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । सोमबार सविन केसीको ह्याट्रिक सहयोगमा श्री कुमारी क्लबमाथि ३–१ को सहज जित निकाल्दै खुमलटार लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लन सफल भएको हो ।
जितसँगै खुमलटारको ५ खेलबाट १३ अंक पुगेको छ । शीर्षस्थानको सातदोबाटो युथ क्लबको समान ५ खेलबाटै १५ अंक छ । तेस्रो स्थानको बाँसबारीको ११ अंक छ । पराजित श्री कुमारी ५ खेलबाट ३ अंक जोडेर १०औं स्थानमा छ । खुमलटारका सविन केसीले ह्याट्रिक पूरा गर्दा श्री कुमारीका विसन लामाले सान्त्वना गोल गरे । सबै चार गोल पहिलो हाफमा सम्भव भएको थियो ।
एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलको नवौं मिनेटमा सविन केसीको गोलबाट खुमलटारले अग्रता लिएको थियो । १२औं मिनेटमा श्री कुमारीका मिसन लामाले गोल गर्दै खेललाई १–१ गोलको बराबरीमा ल्याए । १५औं मिनेटमा सविनले गोल गर्दै खुमलटारलाई पुनः २–१ को अग्रता दिलाए । ४२औं मिनेटमा सविनले ह्याट्रिक पूरा गर्दा खुमलटारले पहिलो हाफमा ३–१ को अग्रता लिन सफल भएको थियो । दोस्रो हाफमा दुवै तर्फबाट गोल निस्कन नसक्दा खुमलटार ३–१ ले विजयी हुन सफल भयो ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस रत्नजित र रशिला च्याम्पियन
यस्तै, अर्काे खेलमा इन्ज्युरी समयमा संगम शाहीले गोल गरेपछि हारतर्फ उन्मुख टुसाल युथ क्लबले टोखा श्री भगवती क्लबसँग अंक खोस्न सफल भएको छ । खेल १–१ गोलको बराबरीमा टुंगिएको हो । अन्तिम एक मिनेट सम्हालिन नसक्दा श्री भगती टोखा भने जितबाट वञ्चित बन्यो । बराबरीपछि श्री भगवती ५ खेलबाट ५ अंक जोडेर नवौं स्थानमा यथावत रहँदा टुसाल ५ खेलबाट ८ अंक जोडेर चौथो स्थानमा उक्लिएको छ ।
खेलको नवौं मिनेटमा मोहन थापाको गोलबाट श्री भगवतीले अग्रता बनाएको थियो । इन्ज्युरी समयमा संगम शाहीले गोल गर्दै खेललाई १–१ गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए ।
सोमबारै सविन केसीको ह्याट्रिक सहयोगमा खुमलटार युथ क्लबले श्री कुमारी क्लबमाथि ३–१ को सहज जित निकालेको थियो ।
लिगमा मंगलबार दुई खेल हुनेछ । ब्वाइज युनियन र रानी पोखरी कर्नर टिम (आरसीटी) बीच मध्याह्न १२ः३० बजे तथा दोस्रो खेलमा सातदोबाटो युथ क्लब झम्सीखेल युथ क्लबबीच दिउँसो ३ः३० बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
एजेन्सी - September 22, 2021
काठमाडाैं । सप्तरीमा विषालु सर्पले डस्दा एकै परिवारका दिदीभाइको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा खडक नगरपालिका–२ बेल्हीका १४ वर्षीया सुनिता मण्डल र नौ...
कांग्रेस १४औं महाधिवेशनः १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन अनिश्चित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन गर्न ढिला गरेसँगै ९ भदौका लागि तोकिएको पालिका अधिवेशनसमेत अनिश्चित बनेको छ । क्रियाशील सदस्यता नामावली...
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएका छन् । अध्यादेश खारेजपछि मात्र...
काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का नियुक्त भएका छन् । खड्का परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएको जानकारीसहितको पत्र राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको...
दुई दिनपछि सरकार विस्तार हुन्छ : प्रचण्ड
जनकपुरधाम । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४ असोजपछि सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै...
काबुलका मेयरले भने, महिला कर्मचारी कार्यलय नजानू
काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका नयाँ मेयरले महानगरका सम्पूर्ण महिला कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन दिएका छन् । मेयर हामदुल्लाह नोमानीले केही समयका लागि महिला...
सरकार विस्तार गर्न नसक्नेले राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले उपाध्यक्ष रावल
अछाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार नहुनु दुःखद भएको बताएका छन् । नेकपा एमाले विभाजनपछि पहिलो पटक गृह...
एमाले महाधिवेशन: पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य सबै निर्वाचित हुने
काठमाडौं । अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको एमालेले अब पदाधिकारीसहित सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ...
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ -
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा सत्ता चलायमानको स्थिति नहुँदा विकासको मार्ग र मानवीय संवेदनामा ठूलो क्षति भइरहेको छ । नेपाली राजनीति विगतबाटै प्रतिरोध र प्रतिशोध साँध्ने...
२५९ जनामा कोरोना संक्रमण, ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप २५९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय ३ हजार...
बलिउडका चर्चित अभिनेता दिलिप कुमारको निधन
मुम्बइ । बलिउडका चर्चित अभिनेता दिलिप कुमारको ९८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । बलिउडमा ‘ट्रेजेडी किङ’को उपनामले चिनिने दिलिपकुमारले मुम्बईको खार हिन्दुजा अस्पतालमा आज...
वैशाखपछि ओली जान्छन्, अर्को खिलराजको खोजी भइसकेको छः वर्षमान पुन
युभेन्टसको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी साम्पडोरिया
चार वर्षमा ६ किलोमिटर कालोपत्रे !
राजेश पायल राईको नयाँ पूर्वेली गीत
राजपा नेपाल स्थापना दिवस भएन एकता महाधिवेशन
झापामा पिकअप भ्यान पल्टिँदा एकको मृत्यु
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध डम्फु बजाएर प्रदर्शन (फोटोफिचर)
सुदुरपश्चिममा ५ जना कोरोना संक्रमति थपिए
बारामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा, घरको कम्पाउण्डमा समेत निस्कन नपाइने
कोरोना भाईरसबाट बच्न स्थानीयवासीलाई माक्स वितरण
एमालेमा १५ बुँदे आचारसंहिता : सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेताकार्यकर्ता कारवाहीमा पर्ने
ग्याँस र पेट्रोलको विकल्पमा उर्जामा लगानी बढाउनु पर्छ : गृहमन्त्री खाण
राजधानी समाचारदाता - September 20, 2021
पदकबारे ओलीको टिप्पणी : आज श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो ? बाउको मुख हेर्ने दिन हो ?
महेश्वर गौतम - September 16, 2021
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस राजस्थानको रोमान्चक जित